အမြစ်မပါတဲ့ ပဲတီပင်ပေါက် လုပ်နည်း--- ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အမြစ်မပါတဲ့ ပဲတီပင်ပေါက် လုပ်နည်း---
လွယ်လွယ်နဲ့ ပဲတီပင်ပေါက်များများထွက်အောင် စိုက်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုံးမှာ ၄ ထပ် စိုက်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပဲတီပဲ တစ်ပိသာကို ပဲတီပင်ပေါက် ၄ ပိသာရပါတယ်၊ ပဲတီပဲ တစ်ဆကို ပဲတီပင်ပေါက် ၄ ဆရပါတယ်။ ဓါတုဆေးဝါးမသုံးတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ ပဲတီပင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အိမ်ထောင်စားသုံးဖို့ လုပ်နိုင်သလို စီးပွားဖြစ်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. ပလပ်စတစ်ပုံး (သို့ ) ၀ါးခြင်းတောင်း
3. ဆန်ခါ (ပဲတီပဲ မကျနိုင်တဲ့အပေါက်ငယ် ကော်ဆန်ကာကို ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်မှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တောမှာတော့ ၀ါးနဲ့ရက်ယူနိုင်ပါတယ်။ )
4. ဂုံနီအိတ်။ (ရေထိမ်းထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်)
5. ရှော့တ်ပင် (သို့ ) မြေဖြူ (သို့ ) မီးသွေးခဲ။
ပုံ1) ကော်ပုံး ဒါမှဟုတ် ခြင်းတောင်း တခုခုကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အများနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘိလပ်မြေ ပိုက်လုံးကြီးတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ခြင်းတောင်းအကွက်ကျဲရင်တော့ အင်ဖက်နဲ့ ကာရံထားပြီး အလင်းရောင်မ၀င်အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ပုံ2) ပုံးအောက်ပိုင်းကို အပေါက်ဖေါက်ပါ။ရေကျလွယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပုံးဆိုရင် သံချောင်းမီးအပူပေးပြီးဖေါက်လို့ရပါတယ်။ ခြင်းတောင်ဆိုရင်တော့ အပေါက်ဖေါက်စရာမလိုပါ။
ပုံ3) ဂုံနီအိတ်အစကို ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် ပုံးအရွယ်ဖြတ်ပါ။
ပုံ4) ဂုံနီအိတ်ကို ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် ပုံးအရွယ်ထက် အနည်းငယ်ကြီးအောင် ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းဖြတ်ပါ။ ပဲတီပင်ပေါက် တစ်ပုံးစာအတွက် ဂုံနီအိတ်ဖြတ်စ ၆ စလိုပါတယ်။
ပုံ5) ကော်ဆန်ခါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ကိုက်နဲ့ရောင်းပါတယ်။
ပဲတီပဲ မပေါက်ကျနိုင်တဲ့အရွယ် ဆန်ခါဖြစ်ရမယ်။ တောမှာတော့ နှီးဝါးနဲ့ ရက်လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။
ပုံ6) ဆန်ခါကို မိမိပြုလုပ်မယ့် ပုံးနဲ့ အရွယ်တူတိုင်းပါ။ ခြစ်ရာပေးရာမှာ အလွယ်တကူရှာလို့ ရတာနဲ့ ခြစ်ရာပေးလို့ ရပါတယ်။ ရှော့တ်ပင်၊ မြေဖြူ၊ မီးသွေးခဲ စတာတွေနဲ့ ခြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံ၇) တိုင်းထားတဲ့ခြစ်ရာ အတိုင်းဖြတ်တောက်ပါ။
ပုံ၈) ပုံးနဲ့ အရွယ်တူဖြတ်ထားတဲ့ ဆန်ခါပုံဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ9) ပုံးအောက်ပိုင်းမှာ ခဲ ဒါမှမဟုတ် အမာခံ တခုခုနဲ့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အောက်စီထားပါ။ ပဲတီပင်အမြစ် တိုးကျနိုင်ဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးတစ်ထပ်ပဲလိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့အထပ်တွေအတွက် မလိုပါ။
ပုံ၁၀) ဖြတ်ထားတဲ့ ဆန်ခါ ၂ ချပ်ကို အောက်အမာခံ ပေါ်မှာ တင်ပါ။
ပုံ၁၁) အဲ့ဒီဆန်ခါ ၂ ချပ်ပေါ်မှာ ဂုံနီအိတ်ဖြတ်စ တစ်စကို တင်ပါ။ (ဂုံနီအိတ်စက ရေထိမ်းပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်)
ပုံ၁၂) ဂုံနီအိတ်အစပေါ်မှာ ဆန်ကာ တစ်ချပ်ကိုတင်ပါ။ ပြီးရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲတီပဲ (ရေနွေးပူပူတစ်ခွက် ကို ရေအေး ၃ ခွက်နဲ့ ရောပြီး ပဲတီပဲကို ၈ နာရီခန့် စိမ်ပါ။) ကို ဖြန့် ထည့်ပါ။ ၂-၃ စေ့ ထပ်နေအောင် ဖြန့် ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဒီပဲပေါ်မှာ ဂုံနီအိတ်စတစ်ချုပ်ထပ်တင်ပါ။ ပြီးရင် ဆန်ခါ တစ်ချပ်တင်ပြီး ရေစိမ်ပြီးသားပဲတီပဲ ကို ဖြန့် ထည့်ပါ။ အဲ့ဒီလို အဆင့်ဆင့် ၄ ထပ်အထိ လုပ်ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးအထပ် ပဲပေါ်အထပ်ပေါ်မှာ ဂုံနီအိတ်စ ၂ ချပ်နဲ့ အုပ်ထားပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ကနေ ရေဆွဲအောင် လောင်းပါ။ ပုံးအောက်ကနေ ရေစိတ်ကျတဲ့အထိရေလောင်းပါ။ ပြီးရင် အလင်းရောင်မ၀င်အောင် အပေါ်ကနေ တခုခုနဲ့ လုံအောင်အုပ်ထားပါ။
ပုံ13)3နာရီခြား တခါ ရေလောင်းပေးပါ။ နံနက်ကနေ ညနက်တဲ့အထိ လောင်းပေးပါ။ ၃ နေ့၂ ည (နာရီပေါင်း ၆၀ခန့် )မှာ စားသုံးနိုင်တဲ့ ပဲတီပင်ပေါက် ရပါလိမ့်မယ်။ ပဲတီပင်ပေါက်ကို ပုံးထဲကနေ တစ်ထပ်ခြင်းထုတ်ယူပါ။ ပုံထဲက အတိုင်း တစ်ထပ်ခြင်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။)
ပုံ14) အနောက်ခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပဲတီပင်ပေါက် အမြစ်တွေ ဆန်ခါနဲ့ ဂုံနီအိတ်ကို ဖေါက်ထွက်နေပုံဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ15) ပဲတီပင်ပေါက် မှာ ပဲတီအခွံတွေ မကပ်နေအောင် ရေထဲမှာ ခါချနိုင်ပါတယ်။ ပုံထဲမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း ပဲတီပင်ပေါက်ဘက်ခြမ်းကို မှောက်ပြီး ရေထဲမှာ ခါချရင် ပဲတီအခွံတွေ ရေထဲမှာ ကျကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ16) ပဲတီအခွံတွေ ကျွတ်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ17) ပုံထဲက အတိုင်း ပဲတီပင်ပေါက်ကို ဓါးနဲ့ ဖြတ်ယူမယ်ဆိုရင် အမြစ်မပါတဲ့ ပဲတီပင်ပေါက်ကို အဆင်သင့်စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။